सुलामंचमा विप्लवको प्रश्नःअमेरिकाले दिएको ५० करोडले नेपालको कायापलट हुन्छ ?
उनले अहिले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध भएको आन्दोलन एउटा झिल्को मात्रै भएको पनि बताए । ‘अहिले एमसीसीविरुद्धको यो आन्दोलन झिल्को मात्रै हो, एमसीसी जर्बजस्त दलालहरूको कमिसनको लोभमा थोपर्न खोजियो भने राँको बन्छ राँको’ विप्लवले देशको माया हुने सवै नेपाली जनतालाई एकजुट हुन आव्हान गरे । ‘आउनुस्, पार्टीपाटीमात्रै होइन, एमसीसीविरुद्ध लडौ भनेर भन्दा कतिपयले पार्टीमा गारो हुन्छ भन्नुभयो । तर अव मेचीदेखि कालीसम्मका सवै जनता एक ढिक्का हुनेछन् र कुनैपनि मुल्यमा एमसीसी थोपर्न दिनेछैनौ’ विप्लवको दावी छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपालमा एमसीसी लागु गर्ने भनिएको छ । कानुनी ढंगले अमेरिका नै माथि हुने, सुरक्षा पनि उसैले गर्ने त्यस्तो प्रावधान राखिएको छ’ विप्लवले लप्सेफेदीदेखि सुनौलीसम्म सुरक्षा गर्ने नेपालमा प्रहरी र सेना छैनन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय मन्त्रीले एमसीसीको पैसाले सम्बृद्धि हासिल गर्न नसकिने अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरले के नेपालको कायापलट हुन्छ ?भन्दै सत्तापक्षलाई प्रश्न गरे ।
उनले आफुहरु जनताप्रति प्रतिवद्ध भएको र विगतमा समेत सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाएको र अझै जनताको अधिकारको लडाइका लागि लडिरहने बताए । उनले आफुसँग भएको सहमति इमान्दारपूर्वक लागु गर्न सरकार पक्षलाई चेतावनी दिए । ‘हामी जनताको अधिकार चाहान्छौँ, स्वाधीन राष्ट्रका लागि लडिरहेका छौ । सत्यलाई दवाउन तरवार र बन्दुक चलाइएको छ तर बन्दुक र तरबार जनताका अगाडि केही पनि होइनन् । जनता भनेका आमा जस्तै हुन्’ उनले न्याय र सत्यको बाटोमा लगातार हिँड्ने बताए ।
उनले जयसिंह धामीलाई दिनदहाडै भारतले हत्या गरेको भन्दै नागरिकले राज्य नै नभएको महशुस भएको बताए । ‘जनताले राज्य नै नभएको महशुुुस गरेका छन, मन्त्रीहरुलाई कमिसन आयो आएन भन्ने चिन्ता छ’उनले सुँगुरले खाएझै कमिसन खाइरहेको बताए ।